Benishaangul Gumuz: ‘Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to’annoo jala oolfaman’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBenishaangul Gumuz: ‘Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to’annoo jala oolfaman’
Miseensonni humna poolisii addaa Naannoo Benishaangul Gumuz wal dhabdee tibbana uumamee ture keessatti hirmaachaa turan 10 to’annoo jala oolfamuu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa Godina Wallagga Bahaa Obbo Taakkalaa Tolasaa BBC’tti himan.
(bbc)—Wal dhabdee naannichatti uumamee tureen walqabatees namoota 75,000 qe’eefi qabeenyaa isaanii irraa buqqaasuun, lubbuu namoota baay’ee galaafatameera. Gocha kana duubas humni hidhate akka jiru namootni qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’uun bakkeewwan garaagaraa buufatanii jiran BBC’tti himaniiru.
”Wallagga Bahaatti 23 ajjefamanii 72,000 qe’eerraa buqqa’aniiru”
Raayyaan ittisa biyyaas namoota hidhannoo guutuun dhukaasa banan kanatti marsuun namoota 10 to’achuu Obbo Taakkalaan himan.
Dabalataanis humnootiin poolisiin kunneenis to’annaa jala kan olfaman osoo mana namootaa gubuu fi qabeenya barbadeessanuu argamuun ta’ulleen dubbatan.
Humni hidhannoo guutuu waliin to’annoo jala oolfame kunneen buufata raayyaa ittisa biyyaa naannichatti argamuufi kaampii saddeettaffaa jedhamuun beekamutti akka argaman himaniiru.
Obbo Taakkalaan qaama akkamiitu gocha kana qindeessaa jira kan jedhu ilaalchisee mootummaan qorannoo barbaachisaan taasisuun ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf ni hojjetas jedhan.
Kana dhugoomsuun kan danda’amu immoo yoo uummatni qe’ee isaatti deebi’ee haalichi tasgabbaa’ee ofumaan qaama shakkamu eeruun deeggarsa taasisedha jedhan.
Haalichi ammayyuu guutummaa guutuun akka hin dhaabbannes himaniiru. Wal dhabdee kanaan namootni 75,000 ol qe’ee isaanii irraa buqqa’uun magaalaa Naqamtee fi aanaalee godina Wallaga Bahaa adda addaa keessatti deeggaramaa akka jiranis dabaluun himaniiru.
Dhimma kanaratti kan haasofsiisne Bulchaa Itti Aanaan nannoo Benishaangul Gumuz, Obbo Abarraa Baayyataa, walitti bu’iinsa kanaratti humni naannichaa tasumaan hin hirmaanne jechuu haalaniiru.
Hanga ammaatti humni addaa naannichaa kan jiru magaala Lojigaanfooy Cogee keessa, lakkoofsi isaanis meeqa akka ta’e ni beekama jedhaniiru.
Dabalataniis “Tasumaan walitti bu’iinsicha irratti humni addaa naannichaa hin hirmaanne’ jechuun cimsanii dubbataniiru.
Update: E.Wellega security chief Takele Tolosa says 10 members of the Beneshangul-Gumuz region special police detained by the fed. defense force suspected of “direct involvement in the killings & displacement.But BG region VP Abera Bayeta denies the reporthttps://t.co/iQMtvzLZKT
— Addis Standard (@addisstandard) October 4, 2018
OPDO dha moo ODP dha? Ammallee rafaaatuma jira! Moo ammallee sodaa wayyanee isa caldhisiisaa jira!! Humna fii fedhii warri Benishaanful ummata Oromoo akkanatti ittiin godhan hin qaban. Kana tigreen akka duuba jirtu beekkamaadha!
Ragaan Abdi Iley viidoo isaa irratti gadi dhiise gahaa dha. Abdi Iley, akka Ato Getachew Asafa Tigree dhaa, yaakka san hundaa isa raawachiisaaa ykn hojjechiisaa ture addeessee jira. Ammaas taatu yakka akkanaa kana kan naannoo Benushaangulitti ummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru akka wayyaaneen duuba jirtu ifaadha!
OPDO/ODP ammallee waayyaanuma sodaachaa jira moo ummata Oromoo irraa dandaa hin eega garaa isaa guutate? Maqumaaf angoo qabnaa jedhee gurra nu duuchaa halkanii guyyaa ree! lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyi miti kan ummata biyyaa itti gaafatamu! Moo isaan amma waan suusiin toophiyaa isaan qabdeef kan ummata Oromoo tirraa dantaa takallee hin qaban.
Toophiyaa dendemachiifnee jedhanii tuma fanxasiyaa godhuudha! Walgahiin isaanii tan Fanxaziyaa tuu kan gargar cituu deemtu hin fakkaattu!. Oromoon suusii Toophiyaa irraa dantaa takkallee hin qabu! Wanni ummatni Oromoo barbaadu nagayaan jiraachu!
Lammaa Magarsaa yoo nagaya Oromoota eegee eegsiisuu hin deendeenne ykn nagayaa Oromoota tirraa dantaa takkallee hin qabaannee ummatni Odromoo Lammaa Magarsaa angoo irraa buusuu qabu! Lammaa Magarsaa angoo irraa arihamuu qaba!
Down Down Lammaa Magarsaa!!!!
Oromoo ficcisiisee angoo irraa kaasaa!!
First they were displaced from Hararghe by Liyu police from their homes, relocated in Benishangul Gumuz, and now they are not only getting killed, but innocent human beings have been hunted like wild animals, buttered, burned alive in the way Cooked to be EATEN by another human beings? Did I just hear these people’s stories about what’s happening to them in Ethiopia correctly in this interview? #Unbelievable.